Antalya Ummeli | I-Mehmet Dursun Law Office, i-Mediation Office
Injongo yethu kukuba akhusele ilungelo zonke iintlobo zabantu kuzo zonke iinkqubo zomthetho, amalungelo kumnini kungekudala kwaye akunike eyona ndlela esemthethweni, amalungelo ukuthatha amanyathelo ayimfuneko kwangaphambili ukuba ulahlekelwe nokhokelo amaqela kwakhona ukunika iingcebiso eziyimfuneko.
Iiyure zokusebenza ukusebenza ngoMon-Sat
Unokuthetha nathi kwimeko nganye.
Antalya ummeli, ukuthotyelwa komthetho nokuthotyelwa. Ummeli uAntalya
U-Antalya Ummeli Wezobugebengu - Ummeli oPhezulu onzima kunye noMmeli woLwaphulo-mthetho
U-Antalya IT Ummeli -Izono ze-Intanethi ziyasikhuthaza
I-Attorney Case Case Cancellation, Case Case Case
Ummeli wezeMatyala, uMmeli wezeMpilo, uMmeli woMthetho wezeMpilo
Ummeli woThengi waseAntalya, uMmeli wamalungelo wabathengi
Ummeli wezeMisebenzi waseAntalya, uMmeli woMqeshi, uMmeli weCandelo loShishino
I-Antalya IGqwetha leGugu, i-Redd-iIfa leMveli, iLifa loLuntu loMmeli
Igqwetha kuMthetho e-Antalya
U-Antalya Ummeli WeeNkampani, Ummeli Wezithuthi
INTSHOLONGWANE NEENKCAZO ZOKUBHALA
U-Antalya Uqhawulo lomtshato, Ummeli, uMmeli woLuntu
I-ECHR ngamnye isicelo
I-Idea yeMisebenzi yeMisebenzi yeMisebenzi
I-Antalya I-Attorney yePentent, i-Idea ne-Art Works Advocate, uMmeli weMpawu,
Ummeli woBambiswano, uMmeli woBambiswano u-Antalya
U-Antalya Ummeli Wezakhiwo, uMmeli Wezakhiwo, uMmeli Wezomhlaba
Ummeli weRhafu, ummeli weRhafu
abameli bethu Unokuqhagamshelana ukudibana.
izifundo ku iingcali zethu zengcali zihlala kunye nawe.
Antalya Igqwetha Firm, ukunyanzeliswa komthetho, umthetho zorhwebo, umthetho bolwazi, umthetho usapho, umthetho indawo kunye ukuhlawulwa becala zomthetho kuwo onke amasebe komthetho kwaye qaphela isigqibo senkundla ngamazwe kwakhona ibonelela ngeenkonzo inguqulelo zomthetho kuzalisekiso kunye nokuthengiswa real estate ngokuxhomekeke basemzini. kutshanje ofisi yethu bemdumisa omkhulu kwilizwe lwemali virtual, imali virtual kunye ukutshintshiselana lwemali virtual kwemigodi, ukulungisa izikhalazo yale miba kwaye inika iinkonzo Consulting ezinxulumene utyalo-mali.
ETurkey Antalya kwakhona Dursun Mehmet ihlabathi liphela njengoko injongo yethu Advocacy Office, ehlabathini lonke athathe amanyathelo ukunqanda ulhleko kwamalungelo kubathengi bethu, ukuba amalungelo abo sele kwamafutha kukuba abuyisele kangangoko ezandleni yomthetho.
Umlamli - Ugqwetha - Ummeli weMpawu
Ummeli-uMlamli -Tyala loMthengisi
UMnuCüşavir Bilal wambethe
Umcebisi wezeMali uBilal Kilim
Yazi. kunye ne-Software Consultant
I-Samet EFE - Iingcali zoLwazi
Yena uye metres. Davut Dursun
Umcebisi weGM & Investment
Jonga iProfayal Full Full
Sisekhonzweni lakho kunye negqwetha lethu elinobuchule be-estate and forestry law.
Sifuna ukusombulula zonke iingxaki zakho negosa lethu owenze umsebenzi wezemfundo kwi-real estate kwaye ngokukodwa i-2B enemibambano eninzi yezomthetho ezweni lethu.
Ulwazi malunga ne2B
Siyakukhusela onke amalungelo akho ngendlela yezomthetho kunye nezobugebengu, ngokweBitcoin, iBlockchain kunye nayo yonke imali engqinelanayo, zombini i-computationally kunye ngokomthetho.
Saseka umbutho yokuqala engekho phantsi kukarhulumente, Association of Currency Virtual ukukhusela amalungelo akho kunye amagqwetha lobungcaphephe kunye nabacebisi eTurkey.
Ummeli uAntalya / Siyakukhusela amalungelo abantu basemzini kwilizwe lethu kunye namalungelo abantu bethu kumthetho wamazwe ngamazwe.
Turkey enkundleni phambi kwamehlo ethu kunye namaziko bethu namazwe angaphandle, ngoxa ukulwela amalungelo abemi bethu kunye iintlanga igunya kwiNkundla.
Amava e-20 iminyaka egameni lakho kuzo zonke iinqununu
Yethu ofisi, ukunyanzeliswa komthetho, umthetho zorhwebo, umthetho bolwazi, umthetho usapho, umthetho indawo kunye ukuhlawulwa becala zomthetho kuwo onke amasebe komthetho kwaye qaphela isigqibo senkundla ngamazwe kwakhona ibonelela ngeenkonzo inguqulelo zomthetho kuzalisekiso kunye nokuthengiswa real estate ngokuxhomekeke basemzini. kutshanje ofisi yethu bemdumisa omkhulu kwilizwe lwemali virtual, imali virtual kunye ukutshintshiselana lwemali virtual kwemigodi, ukulungisa izikhalazo yale miba kwaye inika iinkonzo Consulting ezinxulumene utyalo-mali. ETurkey Antalya kwakhona Dursun Mehmet ihlabathi liphela njengoko injongo yethu Advocacy Office, ehlabathini lonke athathe amanyathelo ukunqanda ulhleko kwamalungelo kubathengi bethu, ukuba amalungelo abo sele kwamafutha kukuba abuyisele kangangoko ezandleni yomthetho.
IiNdawo zethu zoLwazi Fumana iziphumo eziphumelelayo.
Wonke umntu akavumelekanga ukuba abe nempumelelo kuzo zonke iindawo, kodwa ukuba une iindawo ezininzi iingcali ezizodwa kunye nempumelelo ishishini apho nawe xa kuyishiya iingcali.
Iimeko kunye neengcali
ICANDELO LEBHUNGA B.BAVVURU
I-TAX IKHASELA UMTHETHO
URHULUMENTE WOMTHETHO OLAWULO
Jonga zonke i-sub-specialization
IZIKHONO ZENGCACISO ZOLWAZI
INTSHOLI NOKUBHALA ABASEBENZI
UMCWENZI WEMSEBENZI WABASEBENZI NABASEBENZI
IIMISEBENZI NEEMISEBENZI ZEZIKHATHI
I-CREES CASES UMCWENZI
UMTHETHO WOMTHETHO OSEBENZINI
IINKCUKACHA ZOKUSEBENZISWA KWEENKCUKACHA
Thina apha ...
UKUBHALWA KWAMANDLA AMANDLA
abameli bethu nkcazelo
Imidiya ebhaliweyo nebonwayo kwi-press and special interviews.
Sebenza kwiiNdaba zangoku ezivela kuBameli bethu
Ulwazi olukhoyo kunye nolwazi jikelele kwintsimi yomthetho lunokufunyanwa kumanqaku ethu.
Uyakwazi ukubona ukutshintsha yethu Indlela umthetho yaye ngokutsho nemiba case-mthetho ngoku. Thina isicelo kuhlangana ingxabano yethu yezomthetho kwintsimi yomthetho mna kweza ngomkhondo uphuhliso inkonzo efanelekileyo nomthetho omtsha ngendlela efanelekileyo ngelixa umthetho.
Konu Zivalekile ukusibonisana nathi kuyo yonke imicimbi esemthethweni. "
Ukutyala imali e Turkey
Real-Estate ukuthengwa Turkey
YINTONI YOKUBHALISA NOKUXHUMA? INDLELA YOKUFAKA?
ISIHLOKO SOKUPHAKHA KWEMISEBENZI YOKUPHAKWA KWEMISEBENZI | UKUPHATHWA KWEZINDABA
Iinkonzo zokuBala kunye nendlela esisebenza ngayo
Amagqwetha ethu kunye neqela lethu lonke lihlala enkonzweni yakho ukwenza yonke imisebenzi efunekayo kuwe.
Amagqwetha ethu akumela wena njengabameli bamalungelo akho kuzo zonke iinkundla kunye namaziko.
Zonke iinkonzo zokucebisa ezifunekayo ukukhusela amalungelo akho nkampani emhlabeni jikelele kwaye ngakumbi kwilizwe lethu linikezelwa ngamagqwetha ethu.
zonke iingcebiso eziyimfuneko ukukhusela amalungelo zakho, amalungelo abantu, amalungelo empahla, njl.njl phambi kwethu, amagqwetha ethu kunye nabasebenzi kuyo yonke imicimbi ephathelele ezinikiweyo kulo lonke ihlabathi ingakumbi Turkey.
IiNkonzo eziPhezulu zeeNkampani
Amagqwetha ethu athatha onke amanyathelo okukhusela okufunekayo ukuze akhusele amalungelo akho omthetho kwaye ahlupheke ukulahlekelwa kwamalungelo kwimimandla yesicelo, ukumelwa, ukukhuselwa, ukurhweba, ulwaphulo-mali oluhambelana nawo wonke oomasipala kunye noomasipala.
Igosa loMlamli uMehmet Dursun
Udliwano-ndlebe malunga neNkqubo yoLwaphulo olutsha
Udliwano-ndlebe kwiNkqubo yoLuntu lwezoLhwebo
Fumana dibana nathi
Unganqikazi ukuqhagamshelana nathi.